Kulan lagu qabtey Bossaso 2 Dec 2, 2012 - 4:17:33 AM
Magaalada Boosaaso waxaa maanta 02 December,2012 lagu qabtay shir lagu soo bandhigayey siyaasadda barakacayaasha Puntland ,waxaana ka qayb-galay saraakiil ka socotey hayada Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR iyo wasaaradda arimaha gudaha Puntland.
Wasiir ku xigeenka arimaha gudaha Puntland Cali Yuusuf Cali Xoosh oo la hadlay Radio Garowe ayaa sheegay in buuga siyaasadda barakacayaasha ay maanta soo bandhigeen uu yahay mid dano badan ay ugu jirto barakacayaasha,wxuuna intaas raacshy inay ku qanceen barkacayasaha & hay'ada qaxxootiga Aduunka ee UNHCR.
Wasiirka ayaan waydiinay inay hoos u dhaceen barkacayaashu,madaama ay koonfur ka imaanayeen,wuxuuna ugu jawaabay inay weli ay yimaadaan,balse ay jiraan dad yar ka kabaty dhibtooyinkii ay uga soo carareen dibna u noqday.
Fikirka in siyaasad loo sameeyo barakacayaasha ayuu Xoosh tilmaamy inuu ka yimid Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiraxmaan xilli 2009 shir barkacayasha ku saabsan uu ka socday dalka Uganda.
Tan iyo burburkii dowladda dhexe Somalia waxa Puntland ku soo qulqulayey kumanaan dad ah oo konfurta iyo bartamaha Somalia ka soo baxsadey colaada iyo abaaraha ka dhici jirey.
Halkan ka dhagayso C/qani Irbad oo wareysanaya Wasiir Cali Xoosh